Oromo News 06.10.21 | KWIT
Guyyaa har’aa irraa jalqabee, deparmantiin police kan magaala Sioux City, Woodbury County Sherriff’s Office, fi Iowa state patrol makiina miidhamef akka eegumsa godhu jiran himan. Warra dalaganis hanga torbaan tokko akka turan hayamaniifi jiran. Waggaa tokko keessati balaa makiina 300 gad hir’isuu yaaludhaf Iowa keessati humda addaa tokko uumani jiran.
Talaali corona virus kan Iowa keessati qorichaa 33,000 akka gatan taasisaa akka jiru himan. Deparmantiin mana fayyaa Iowa jiraattoni Iowa talaali corona virus kan Johnson and Johnson hin fudhanna yoo jedhan malee sanii ala akka dhiisan himan.
Warri federaala talaali Johnson and Johnson kan eegan company expiration date torbaan jahaaf akka akka dabarsuu gaafatan. Haatau malee, July dhumaa iratti yoo ka hin oolini, qorichi baayyen akka gatuu maluu himani jiru.